Daawo Sawirro: Bariis Caag laga sameeyay oo lagu qabtay Wadan kuyaala Qaarada Afrika!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Bariis Caag laga sameeyay oo lagu qabtay Wadan kuyaala Qaarada Afrika!!
Daawo Sawirro: Bariis Caag laga sameeyay oo lagu qabtay Wadan kuyaala Qaarada Afrika!!
Dec 22, 2016WARAR
Soomaali Bariis Cuntoy iska ilaaliya Bariis lagasameyay Caag: waa diginiin Iska Hubiya iyo kaniini lashegay in uu Suuf (mara cad) kasameysan yahay oo loodiray Suuuqyada Soomaaliya.
Dowlada Nageria ayaa shaaca ka qaaday in ay qabatay lana wareegtay 2.5tan oo bariis caag laga soo sameeyay , waxaana bariiskan loogu tala galay in la galiyo Suuqyada waa weyn ee dalkaasi si dadku u cunaan.
Bariiskan caaga laga soo sameeyay ayaa laga keenay dalka Shiinaha, waxaana si qarsoodi ah lagu soo galiyay qeybo kamid ah dalka Nageria sida ay sheegeen Saraakiil katirsan dowlada oo kiiskan gacanta ku haya.
Haruna Mamudu, oo ah Madaxa laanta sharciyeynta alaabta dalkaasi la geliyo ee Lagos ayaa sheegay in bariiskan caaga laga sameeyay loogu tala galay in la galiyo Suuqyada dalkaasi xiliga dabaaldegyada kirismaska iyo sanadka cusub.
Waxa uu sheegay Mr Mamudu in bariiskan markii la kariyo uu isbadalayo uuna yeelanayo dheg dheg, waxa uuna tilmaamay in asayn wali ogeyn waxa ay kala kulmi lahaayeen bariiskan hadii suuqa la galiyo ayna dadku cunaan.
Ganacsatada bariiskan caaga laga sameeyay geysay dalka Nageria ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa damiir laawayaal ah oo nolosha dadkooda dhaafsanaya hunguri, waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo dadka bariiskan dalka soo galiyay.
Dowladda Nigeria ayaa shaybaar u dirtay bariiska si loo ogaado caagga rasmiga ah ee laga sameeyay, waxa aynba dowlada dadka uga digtay in ay iska hubiyaan bariiska iyo cunooyinka kale ee iibsanayaan kahor inta aysan isticmaalin.
Dadka kunool Dalka Nageria ayaa horey dhibaatooyin badan ugu qabay daawooyin dhacay iyo kuwa been abuur ah oo dalkaasi la geyn jiray, waxaana daawooyinkaasi ay sabab u noqdeen dhimasshda dad badan oo kunool dalkaasi.
Previous PostXuseen Carab Ciise oo dib loogu doortay Kursiga Xildhibaanimo ee beeshiisa "Sawirro"!! Next PostAskartii ugu badneyd oo Turkiga looga dilay dagaal ka dhacay Suuriya!!